Muxuu aragti ahaan ka yiri Zidane qaabka ay kooxda Barcelona kaga soo hartay tartanka Champions League?? – Gool FM
(Spain) 11 Maajo 2019. Zinedine Zidane ayaa shir jaraa’id uu kasoo muuqday kahor kulanka ay habeen dambe la ciyaari doonaan Real Sociedad, wuxuu kaga jawaabay su’aalo laga weydiiyay aragtidiisa kaga aadan xilli ciyaareedka soo socda, saxiixyada ay kooxda sameyn doonto iyo ciyaartoyda ka tegi doonta suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Ugu horeyn macalinka reer France ayaa wuxuu wuxuu ka hadlay kulanka ay habeen dambe kula ciyaari doonaan kooxda Real Sociedad horyaalka La Liga wuxuuna yiri:
“Dareenkeyga waa mid aad u fiican, waa kulan aan la ciyaareyno koox kubada cagta ah, wuxuuna noqon doonaa kulan weyn, waxaana rajeynayaa in arinta udhaxeysa labo kooxood ay wanaagsan tahay, waxaana rajeenayaa in Real Madrid ay qaadan doonto kulan aad u fiican”.
Intaas kaddib Zinedine Zidane ayaa wax laga weydiiyay aragtidiisa kaga aadan qaabka ay kooxda Barcelona kaga soo hartay tartanka Champions League wuxuuna kaga jawaab celiyay:
“Way adag tahay inaan ku guuleysato Champions League, waana ognahay in wixii aan sameynay ay tahay wax cajiib ah, inaad ku guuleysato afar jeer tartankan mudo 5 sano ah waa arin qaas ah”.
“Waxay ahayd xaalad aad u adag ee dhib badan ilaa daqiiqadii ugu dambeysay, waana qadarineynaa, balse koob kasta ee aan ku guuleysanay wuxuu inoo yahay muhiim”.
“Horyaalka wuxuu kuu ogolaanayaa inaad noqotid mid wanaagsan maalinba maalinta ka dambeysa wuxuuna kaa caawin karaa tartamada kale”.
“Ma garanayo hadii uu tartanka Champions League yahay kii ugu fiicnaa taariikhda, laakiin waxaa jiray kulamo waa weyn, waa tartan cajiib ah waxaana ku riyaaqnay wax badan”.
Ugu dambeyn Zidane ayaa ka hadlay wararka lala xiriirinayo saxiixa xidiga reer France ee Paul Pogba wuxuuna yiri:
“Sia qof kasta ee kale, waxaan jeclahay ciyaartoyda wanaagsan, balse Pogba waa ciyaaryahan u ciyaara Man United mana doonayo inaan idin kala hadlo qandaraasyada”.
Tababare Klopp oo ka hadlay aragtidiisa kaga aadan sida uu noqon doono horyaalka Premier League xilli ciyaareedka soo socda